Penguin 2.0 Ahoana no hijanonana amin'ny lafiny tsara amin'i Google. Martech Zone
Penguin 2.0 Ahoana no hijanonana amin'ny lafiny tsara an'i Google
Alarobia, Jona 19, 2013 Alarobia, Jona 19, 2013 Kelsey Cox
Iray volana latsaka izay taorian'ny nanombohana ny fanavaozana ny fikarohana farany an'i Google, ary na dia mbola tsy nampiharina tanteraka aza ny teknolojia vaovao Penguin 2.0 miady amin'ny spam dia efa miteraka fanahiana kely izany.
Ireo mpivarotra atiny dia tsy tokony hamoy fo raha mbola mikasa ny hijanona amin'ny lafiny azo antoka an'i Google izy ireo. Raha ny angona voangona ao Marketoinfografika farany indrindra, Nividy Zoo i Google, Midika izany fa ny familiana ireo teknika SEO tsy misy tànana toy ny spamming rohy, ny fanodikodinana na ny fitafiana mangalatra, ary ny fifikirana amin'ny taktika satroka fotsy ihany no mifikitra.
Raha ny tena manokana, ireo tranonkala mifantoka amin'ny famokarana atiny mifandraika sy tsy manam-paharoa, na dia miantoka ny fanatsarana ny tranokala araka ny tokony ho izy aza, ny backlinks azo itokisana ary ny fambara sosialy matanjaka dia mety tsy hahatsapa ny hafanan'ny Penguin 2.0. Ny atiny nohavaozina tsy an-kijanona, ny fotoana fandefasana pejin-tranonkala haingana ary ny rohy azo itokisana avy amin'ireo tranonkala malaza dia fomba iray koa hiantohana ny fiatraikany kely.
Ity ny fijerena feno ny zavatra ananan'i Google:
Tags: Content MarketingGoogle +-barotrapenguin 2.0
Ny fiankinan-doha amin'ny tetika marketing miditra
Andrasana amin'ny fampiasam-bola amin'ny varotrao